အရပ် (၆) လက်မ ပိုရှည်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
28 Mar 2018 . 2:44 PM
အရပ်အမောင်းဆိုတာ မျိုးရိုးဗီဇအပေါ် ၆ဝရာခိုင်နှုန်းမှ ၈ဝရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်ရောက်မှုရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှု (ဥပမာ – အာဟာရ) အပေါ် ၂ဝရာခိုင်နှုန်းမှ ၄ဝရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မျိုးရိုးဗီဇက အရပ်ပုလာပေမယ့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုမျိုး လုပ်ပေးနိုင်ရင် အနည်းငယ်အရပ်ပိုရှည်နိုင်တဲ့သဘောပါပဲ။
အနောက်တိုင်းတွေမှာ ၅ပေ၁ဝလက်မကို ပုံမှန်အရပ်အမြင့်လုိ့ သတ်မှတ်ကြပေမယ့် အာရှတိုက်မှာတော့ ၅ပေ၇လက်မလောက်ဆို မဆိုးလှပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ၁၉နှစ်အရွယ်ထိ အရပ်ရှည်နိုင်ပြီးတော့ အဲဒီထက်ကျော်သွားရင်တော့ အရပ်ရှည်တာ ရပ်တန့်သွားပါပြီ။ ယောက်ျားလေးတွေက ၂၂နှစ်အရွယ်ထိ အရပ်ဆက်ရှည်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာတော့ အရပ်ရှည်နိုင်သေးတဲ့ အသက် (၂၂) အောက်သူတွေကိုသာ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အသက် (၁၆) နှစ်ကျော်လာပေမယ့် အရပ်အမြင့်က ၅ပေလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင် အခုဆောင်းပါးက အသုံးဝင်မှာပါ။
၁။ အစားအသောက် ဂရုစိုက်ပါ။
အရပ်အမောင်းဆိုတာ Human Growth Hormone (HGH) ဟောမုန်းအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ HGH ဟောမုန်းက ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့ ကြွက်သားသန်စွမ်းဖို့ အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် HGH ဟောမုန်းကို အားကောင်းစေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင် အရပ်ပိုရှည်လာမှာပါ။ အသားဓာတ် (Protein) ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာ (နွားနို့၊ ကြက်ဥ၊ ငါးနဲ့ ပေါင်မုန့်) ၊ သတ္ထုဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာ (ကိုက်လန်၊ မုန်လာဥနဲ့ ဒိန်ခဲ) နဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာ (မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ) တွေအပြင် အမဲသား၊ ကွေကာအုတ်နဲ့ ပဲအမျိုးမျိုးကို စားသုံးရမှာပါ။ တစ်နေ့ကို နွားနို့ ၂ခွက် (သို့) ၃ခွက် သောက်သုံးတာက အကောင်းဆုံးအရပ်ရှည်ဆေးပါ။ အရပ်ရှည်ချင်တယ်ဆိုရင် မနက်စာကို မဖြစ်မနေ စာသုံးသင့်ပါတယ်။ မနက်စာ လွတ်သွားတယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝစနစ်ကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ကြီးထွားမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ အရက်သေစာ မသုံးပါနဲ့။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ အဆီအဆိမ့်တွေ စားတာနဲ့ အရက်သောက်တာက HGH ဟောမုန်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေဖို့ အရပ်ပုရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာကလည်း အရပ်မြင့်မားမှုကို ထိခိုက်စေပြန်ပါတယ်။ အရပ်ရှည်ချင်ရင် ကော်ဖီအလွန်အကျွံမသောက်သင့်ပါဘူး။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ သားသမီးတွေကို အိပ်ရေးဝ အိပ်စက်စေသင့်တယ်။ တစ်နေ့မှာ အိပ်ချိန် ၉နာရီမှ ၁၁နာရီထိ အိပ်စက်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ အိပ်စက်ချိန်မှာ HGH ဟောမုန်းတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို အိပ်ချိန်ပြည့်အောင် အကောင်းဆုံးထိန်းကျောင်းပေးသင့်တယ်။ ည၉နာရီလောက်မှာ အိပ်ရာဝင်ပြီး မနက်၆နာရီခွဲမှာ ထနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
၄။ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။
၁၃နှစ်၊ ၁၄နှစ်အရွယ်က အရပ်ရှည်ဖို့ အကောင်းဆုံးအရွယ်ပါပဲ။ ဒီအချိန်တွေမှာ မကျန်းမာတဲ့အခါမှာ အရပ်အမောင်းဟာ ရှည်သင့်သလောက် မရှည်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီအချိန်မှာ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် နေဖို့ပဲ။ အဖျားရောဂါကအစ တခြားပြင်ပရောဂါတွေကို မဝင်နိုင်အောင် လုပ်ထားသင့်တယ်။ ဗီတင်မင်စီ အားကောင်းတဲ့ အစားအစာ (လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ရှောက်သီး) တွေကိုလည်း စားသုံးရမှာပါ။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက အရပ်အမောင်းကို မြင့်မားစေပါတယ်။ ဘားဆွဲတာ၊ အိပ်ထလုပ်တာ၊ ယောဂကျင့်တာနဲ့ ရေကူးတာတွေက အရပ်ရှည်စေဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မနက်စောစောထက်ပြီး ပြေးတာကလည်း အရပ်ရှည်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ ပြီးတော့ စာသင်ခန်းမှာ ထိုင်မယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကွေးညွှတ်မနေဘဲ တည့်တည့်မတ်မတ်ထိုင်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ အိပ်စက်မယ်ဆိုရင်လည်း ကွေးပြီး မအိပ်ဘဲနဲ့ တည့်တည့်အိပ်သင့်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ခန္ဓာကိုယ် ဝဖြိုးနေရင် အရပ်အမောင်းနိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကျစ်လျစ်အောင် အားကစားပုံမှန်လုပ်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၆။ အစာခဏခဏ စားပါ။
မနက်စာ + နေ့လယ်စာ + ညစာ (၃ချိန်) ခွဲစားတာထက် ခဏခဏစားတာက အရပ်ပိုရှည်ပါတယ်။ ဥပမာ။ တစ်နေ့ကို ထမင်း (၆) ကြိမ်လောက် ခွဲစားတာမျိုးက အကောင်းဆုံးပါ။ ကိုယ့်အတွက် အားရှိမယ်ထင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်စားသုံးတာက အားဖြည့်ဆေးတစ်မျိုးပါ။ ပြီးတော့လည်း ရေသောက်တာက အရပ်ရှည်တာနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ ရေသောက်လိုက်ရင် အစာကြေခြင်းကို ဖြစ်စေပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို အပြင်ကို စွန့်ထုတ်စေပါတယ်။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်က တစ်နေ့ကိုိ ရေနှစ်လီတာ လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ရေများများသောက်လေ အရပ်ရှည်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများလေ ဖြစ်မှာပါ။
အခရာပရိသတ်ကြီးရေ အခုဖော်ပြထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် (၆) ချက်အတိုင်း လိုက်နာမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ရှိသင့်တဲ့ အရပ်အမြင့်ထက် (၆) လက်မအထိ ပိုရှည်နိုင်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရပ်မြင့်မားပြီး မိသားစုအကျိုး၊ နိုင်ငံအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ သားကောင်း၊ သမီးငယ်တွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အရပျ (၆) လကျမ ပိုရှညျလာအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ
အရပျအမောငျးဆိုတာ မြိုးရိုးဗီဇအပျေါ ၆ဝရာခိုငျနှုနျးမှ ၈ဝရာခိုငျနှုနျးအထိ သကျရောကျမှုရှိပွီး ပတျဝနျးကငျြသကျရောကျမှု (ဥပမာ – အာဟာရ) အပျေါ ၂ဝရာခိုငျနှုနျးမှ ၄ဝရာခိုငျနှုနျးအထိ သကျရောကျနိုငျပါတယျ။ အဲဒီတော့ မြိုးရိုးဗီဇက အရပျပုလာပမေယျ့ သငျ့တငျ့လြောကျပတျတဲ့ လကေ့ငျြ့မှုမြိုး လုပျပေးနိုငျရငျ အနညျးငယျအရပျပိုရှညျနိုငျတဲ့သဘောပါပဲ။
အနောကျတိုငျးတှမှော ၅ပေ၁ဝလကျမကို ပုံမှနျအရပျအမွငျ့လုိ့ သတျမှတျကွပမေယျ့ အာရှတိုကျမှာတော့ ၅ပေ၇လကျမလောကျဆို မဆိုးလှပါဘူး။ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ ၁၉နှဈအရှယျထိ အရပျရှညျနိုငျပွီးတော့ အဲဒီထကျကြျောသှားရငျတော့ အရပျရှညျတာ ရပျတနျ့သှားပါပွီ။ ယောကျြားလေးတှကေ ၂၂နှဈအရှယျထိ အရပျဆကျရှညျနိုငျပါတယျ။ အခုဆောငျးပါးမှာတော့ အရပျရှညျနိုငျသေးတဲ့ အသကျ (၂၂) အောကျသူတှကေိုသာ ရညျရှယျထားပါတယျ။ အသကျ (၁၆) နှဈကြျောလာပမေယျ့ အရပျအမွငျ့က ၅ပလေောကျပဲရှိသေးတယျဆိုရငျ အခုဆောငျးပါးက အသုံးဝငျမှာပါ။
၁။ အစားအသောကျ ဂရုစိုကျပါ။
အရပျအမောငျးဆိုတာ Human Growth Hormone (HGH) ဟောမုနျးအပျေါမှာလညျး မူတညျပါတယျ။ HGH ဟောမုနျးက ခန်ဓာကိုယျကွီးမားဖှံ့ဖွိုးဖို့နဲ့ ကွှကျသားသနျစှမျးဖို့ အဓိကလုပျဆောငျပေးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ HGH ဟောမုနျးကို အားကောငျးစတေဲ့ အစားအသောကျတှကေို သုံးဆောငျမယျဆိုရငျ အရပျပိုရှညျလာမှာပါ။ အသားဓာတျ (Protein) ကွှယျဝတဲ့ အစားအစာ (နှားနို့၊ ကွကျဥ၊ ငါးနဲ့ ပေါငျမုနျ့) ၊ သတ်ထုဓာတျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာ (ကိုကျလနျ၊ မုနျလာဥနဲ့ ဒိနျခဲ) နဲ့ ဗီတာမငျဓာတျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာ (မုနျလာဥနီ၊ ကနျစှနျးဥ) တှအေပွငျ အမဲသား၊ ကှကောအုတျနဲ့ ပဲအမြိုးမြိုးကို စားသုံးရမှာပါ။ တဈနကေို့ နှားနို့ ၂ခှကျ (သို့) ၃ခှကျ သောကျသုံးတာက အကောငျးဆုံးအရပျရှညျဆေးပါ။ အရပျရှညျခငျြတယျဆိုရငျ မနကျစာကို မဖွဈမနေ စာသုံးသငျ့ပါတယျ။ မနကျစာ လှတျသှားတယျဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျဇီဝစနဈကို ထိခိုကျစတေဲ့အတှကျ ကွီးထှားမှုကို အဟနျ့အတားဖွဈပါတယျ။
၂။ မူးယဈဆေးဝါးနဲ့ အရကျသစော မသုံးပါနဲ့။
ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ အဆီအဆိမျ့တှေ စားတာနဲ့ အရကျသောကျတာက HGH ဟောမုနျးကို အဟနျ့အတားဖွဈစဖေို့ အရပျပုရတဲ့ အကွောငျးအရငျးတဈခုပါပဲ။ ပွီးတော့ ဆေးလိပျသောကျတာကလညျး အရပျမွငျ့မားမှုကို ထိခိုကျစပွေနျပါတယျ။ အရပျရှညျခငျြရငျ ကျောဖီအလှနျအကြှံမသောကျသငျ့ပါဘူး။
ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ သားသမီးတှကေို အိပျရေးဝ အိပျစကျစသေငျ့တယျ။ တဈနမှေ့ာ အိပျခြိနျ ၉နာရီမှ ၁၁နာရီထိ အိပျစကျနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပဲ။ အိပျစကျခြိနျမှာ HGH ဟောမုနျးတှကေို ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးဖို့ အကောငျးဆုံးထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ မိဘတှအေနနေဲ့ သားသမီးတှကေို အိပျခြိနျပွညျ့အောငျ အကောငျးဆုံးထိနျးကြောငျးပေးသငျ့တယျ။ ည၉နာရီလောကျမှာ အိပျရာဝငျပွီး မနကျ၆နာရီခှဲမှာ ထနိုငျရငျ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
၄။ ကိုယျခံအားကောငျးအောငျ ပွငျဆငျထားပါ။
၁၃နှဈ၊ ၁၄နှဈအရှယျက အရပျရှညျဖို့ အကောငျးဆုံးအရှယျပါပဲ။ ဒီအခြိနျတှမှော မကနျြးမာတဲ့အခါမှာ အရပျအမောငျးဟာ ရှညျသငျ့သလောကျ မရှညျတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီအခြိနျမှာ ကနျြးမာရေးကောငျးအောငျ နဖေို့ပဲ။ အဖြားရောဂါကအစ တခွားပွငျပရောဂါတှကေို မဝငျနိုငျအောငျ လုပျထားသငျ့တယျ။ ဗီတငျမငျစီ အားကောငျးတဲ့ အစားအစာ (လိမ်မျောသီး၊ စပဈြသီး၊ ရှောကျသီး) တှကေိုလညျး စားသုံးရမှာပါ။
ပုံမှနျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက အရပျအမောငျးကို မွငျ့မားစပေါတယျ။ ဘားဆှဲတာ၊ အိပျထလုပျတာ၊ ယောဂကငျြ့တာနဲ့ ရကေူးတာတှကေ အရပျရှညျစဖေို့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ မနကျစောစောထကျပွီး ပွေးတာကလညျး အရပျရှညျဖို့ အကောငျးဆုံးပါ။ ပွီးတော့ စာသငျခနျးမှာ ထိုငျမယျဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျကို ကှေးညှတျမနဘေဲ တညျ့တညျ့မတျမတျထိုငျတာက အကောငျးဆုံးပါ။ အိပျစကျမယျဆိုရငျလညျး ကှေးပွီး မအိပျဘဲနဲ့ တညျ့တညျ့အိပျသငျ့ပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ ခန်ဓာကိုယျ ဝဖွိုးနရေငျ အရပျအမောငျးနိမျ့သှားနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကဈြလဈြအောငျ အားကစားပုံမှနျလုပျပါလို့ အကွံပွုခငျြပါတယျ။
မနကျစာ + နလေ့ယျစာ + ညစာ (၃ခြိနျ) ခှဲစားတာထကျ ခဏခဏစားတာက အရပျပိုရှညျပါတယျ။ ဥပမာ။ တဈနကေို့ ထမငျး (၆) ကွိမျလောကျ ခှဲစားတာမြိုးက အကောငျးဆုံးပါ။ ကိုယျ့အတှကျ အားရှိမယျထငျတဲ့ အစားအသောကျတှကေို ရှေးခယျြစားသုံးတာက အားဖွညျ့ဆေးတဈမြိုးပါ။ ပွီးတော့လညျး ရသေောကျတာက အရပျရှညျတာနဲ့ တိုကျရိုကျပတျသကျနပေါတယျ။ ရသေောကျလိုကျရငျ အစာကွခွေငျးကို ဖွဈစပွေီးတော့ ခန်ဓာကိုယျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို အပွငျကို စှနျ့ထုတျစပေါတယျ။ ပုံမှနျလူတဈယောကျက တဈနကေို့ ရနှေဈလီတာ လိုအပျတယျဆိုပမေယျ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျမှာ ရမြေားမြားသောကျလေ အရပျရှညျဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားလေ ဖွဈမှာပါ။
အခရာပရိသတျကွီးရေ အခုဖျောပွထားတဲ့ လမျးညှနျခကျြ (၆) ခကျြအတိုငျး လိုကျနာမယျဆိုရငျ ပုံမှနျရှိသငျ့တဲ့ အရပျအမွငျ့ထကျ (၆) လကျမအထိ ပိုရှညျနိုငျမယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ ပွီးတော့ အရပျမွငျ့မားပွီး မိသားစုအကြိုး၊ နိုငျငံအကြိုးဆောငျရှကျနိုငျတဲ့ သားကောငျး၊ သမီးငယျတှေ ဖွဈကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ဆဲလ်ဖုန်းစွဲလမ်းမှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိမှတ်ဖွယ် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အချက် (၁၂) ချက်
by Moethae Say . 17 hours ago
စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ (၁၅) ရက် Challenge လုပ်ကြစို့
ထိုင်ဝမ်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး ရထားလမ်းချော်မှုကြီး
ဂျူဗီကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ မန်ယူဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖိအားပေးလိုက်တဲ့ မော်ရင်ဟို Mourinho
အိမ်ကွင်း ရှုံးပွဲကြောင့် အုပ်စုကတက်ဖို့ အမှားလုပ်လို့မရတော့တဲ့ မန်ယူ
စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ် အပြန်လမ်းမှာ ဘယ်လို ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာမလဲ
လာမယ့် ဇန်န၀ါရီမှာ Zlatan Ibrahimovic ကို ခေါ်ဖို့ ရီးယဲလ် ပစ်မှတ်ထားနေပြီ